တောင်ကိုရီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ပိုလန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို တနေ့တခြား ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာလျက်ရှိ - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
တောင်ကိုရီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ပိုလန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို တနေ့တခြား ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာလျက်ရှိ
13 Jun 2019 11:18 am တွင် တင်ခဲ့သည်
တောင်ကိုရီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ပိုလန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို တနေ့တခြား ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာလျက်ရှိနေကြောင်း ဆိုးလ်မြို့တော်အခြေစိုက် ပိုလန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအေဂျင်စီ (PAIH) မှ အာကား ဒီယုစ် တားနော့စကီးက ပြောကြားသည်။
“ကိုရီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် အရေးအပါဆုံး ထိပ်တန်း ဥရောပ ၅ နိုင်ငံစာရင်းထဲကို ပိုလန်ဝင်ရောက်လာပါတယ်” ဟု ဆိုးလ်မြို့တော်ရှိ PAIH ၏ ရုံးတွင် ကျင်းပသော ပိုလန်-ကိုရီးယား စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင် တားနော့စကီးက ပြောကြားလိုက်သည်။
တားနော့စကီးက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် ပိုလန်တွင် Amazon ၏ ထောက်ပို့ဌာန ၅ ခုရှိသည့်အနက် ၄ ခုမှာ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီများ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်း၏ သုံးသပ်ချက်အရ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီများသည် ရုံးခန်းနှင့် ဂိုဒေါင်ဆိုင်ရာ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်များကို အထူးစိတ်ဝင်စားသည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်။
တားနော့စကီးက ထောက်ပြရာတွင် ကိုရီးယားကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်သော နိုင်ငံများရှိ စီမံကိန်းများ(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံရေး အန္တရာယ်အလွန်မြင့်မားသော စီမံကိန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်လေ့မရှိကြောင်း ထောက်ပြသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပိုလန်သည် တည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်မှာ ဂုဏ်ယူဖွယ်အချက်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းလည်း တားနော့စကီးက ပြောကြားသည်။
ပိုလန်-ကိုရီးယား စီးပွားရေးဖိုရမ်ကို နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်သည့် နှစ် ၃၀ ပြည့်ကာလတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၁၃၀ ဝန်းကျင် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
တက်ရောက်လာသူများတွင် ကိုရီးယားကုမ္ပဏီများမှ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ ပိုလန်ကုမ္ပဏီများနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အပြင် ပိုလန် စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် နည်းပညာ ဒုတိယဝန်ကြီး တာဒယုဒ်ရှ် ကော့ရှီန် စကီန်လည်း ပါဝင်သည်။
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အိမ်ခြံမြေ
ရန်ကုန်-တောင်ငူရထားလမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းအဆင့် (၁) အဖြစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင်စတင်မည်...
ဟောင်ကောင်တွင် နေအိမ်ခန်းသစ်များကို ရောင်းချငှားရမ်းခြင်းမပြုဘဲ ကိုင်ထားသည့် developer များကို ပစ်မှတ်ထားသည့် လူလွတ် အခန်းများဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်ဥပဒေ ပြဌာန်းရန် စီစဉ်လျက်ရှိ...
U9 ပြည်သူ့အိမ်ရာစီမံကိန်း အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရက် တိုးမြှင့်
ကမ္ဘာ့ဂီတသမိုင်းတစ်လျှောက် အရောင်းရဆုံးတေးသံရှင်ဖြစ်ခဲ့သည့် ရော့ခ်ဂီတသမား တွမ်ပက်တီ ကလေးဘဝက နေထိုင်ခဲ့သော အိမ်ကို ဝယ်ယူသွားသည့် ဝယ်လက်မှာ ၎င်း၏ ဇနီးဟောင်းဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်လာ...
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် အိမ်ငှားခ ထိန်းချုပ်သည့် ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းထားပြီး ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုသွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထား...
ထပ်ဆင့်အော်စကာဆုရှင် မိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလပ်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင် ကက်သရင်းဇီတာ ဂျုန်းစ်တို့က နယူးယောက်အိမ်ကို သြစတေးလျဘီလျံနာထံရောင်းချပြီး မကြာမီတွင်ပင် ၁၂ ဧကကျယ်သော ကျေးလက်စံအိမ်တစ်လုံးကို တိတ်တဆိတ်ပြန်လည်...
အီတလီကျေးလက်ဒေသသို့ သွားရောက်နေထိုင်မည်ဆိုပါက တစ်လလျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၇၇၀ ဖြင့် ထောက်ပံ့ကြေး ၃ နှစ်ရမည်...
ဟောင်ကောင်တွင် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ထိုးကျနေပြီး ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော လူနေခန်းသစ်များကို လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချရလျက်ရှိ...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် လုံချင်းအိမ်နှင့်...
မနော်ဟရီတောင်ဘက် ပေ (30&40)/မြေကွက်လွတ် အရောင်း
#ဌားမည်!! ၁၈ပေ ၄၅ပေ MBR 1 SBR. 1 Aircon2ဧည့်ခန်း ...
ပြင်​ဆင်​ပြီး တစ်​ထပ်​တိုက်​ ငှါးမည်​။